Ukushintsha emfashini kuyinto evamile. Ezinye izinto zilahlekelwa ukuthandwa kwabantu, kanti abanye, ngokuphambene nalokho, baya ngaphezu kwesitayela esisodwa futhi babe yizintandokazi zomhlaba jikelele. Kwenzeke ngejacket (jacket). Amantombazane emhlabeni wonke ayakwazisa ukusebenzelana kwawo, ikhono lokulungisa lesi sibalo futhi wengeze isithombe sobuhle.
Kulesi sihloko sizokhuluma ngezitayela zamajazi abesifazane ngo-2014, kanye nezindlela zokuhlanganisa amajack nezinye izingubo.
Ijaji labesifazane eliphathekayo 2014
Amagqabhe amade futhi amancane ngo-2014 ahamba ngokuhlangothini - emathangeni lapho sibona ukuthi cishe zonke ubude bebhokethi zihanjiswa ngobuningi obulinganayo. Futhi lokhu kusho ukuthi singakhetha ngokuvumelana nentshisekelo yethu kanye nohlobo lwesibalo .
Ngesikhathi esifanayo, i-fashion for jackets 2014 isinikeza amathrendi ambalwa, okuyinto, uma kungenjalo ilandelwe, iyinto efiselekayo kakhulu:
Ukuphrinta amafloral (ezimbali) . Izembatho ezimbali zihlale zihlonishwa kakhulu ngesikhathi sehlobo sasehlobo. Sebenzisa ngokunenzuzo ithuba lokubonisa emabhakeni othandana namathenda embali, ngaphandle kokufakaza ngokuthi "i-vanilla".
I-shades ehlanzekile . Yisho "cha" ezintweni ezibuhlungu ze "shades" shades. Amajackethi angama-stylish kunawo wonke ka-2014 ayenziwe esidaleni esithambile noma emathonjeni amazithelo. Imibala ephelele - imhlophe - nayo ayilahlekelwa izikhundla zobuholi.
IJometri . I-cage, i-strip ne-peas - izintandokazi zomuntu wonke kule nkathi. Khetha umbala wabo, usayizi kanye nemvamisa ngokwendlela yakho yobuhle, futhi ujabulele umphumela.
Umbala omnyama . Naphezu kweqiniso lokuthi umbala oyinhloko wehlobo usemhlophe, amamodeli amaningi amaqoqo amaqoqo ehlobo ka-2014 aqoshwe embala omnyama ojulile.
Amajaji amasha asebesifazane ngo-2014
Okusemqoka kwentsha yentsha ngesibindi sakhe, ngisho nokuzikhandla. Ngokwefashini yejackets, lokhu kubonakala ngezindlela ezahlukene - othile ukhetha izinto ze-futuristic ezingavamile noma ukusika, othile uthanda izinhlobo ezihlotshiswe ngokucebile ngamaketanga, izigxobo noma ama-rivets, othile othanda ukushicilela okukhanyayo. Kulo nyaka, i-grunge efanele, i-rock'n'roll, i-futurism, i-motifs yama-50 no-70, isitayela sobuzwe, izinto zezemidlalo nokuhleleka.
Noma ngabe iyiphi inketho oyikhethayo, qiniseka ukuthi yonke isithombe sakho sinamandla ekwakheni isethi esinezinzile futhi esivumelanisiwe ngejeketi. Khumbula ukuthi ukuphazanyiswa yilona uhlobo oluphakeme kakhulu lwesitayela esihambisanayo emahlombe ezinyunithi. Iningi labantu lizama ukuphinda imifanekiso engaqondakali, isibonelo, u-Anna Dello Russo, bheka, okungenani engaqondakali, kodwa kaningi - okungenakuqhathaniswa nesiphukuphuku.
Ungazami ukuba ube omkhulu wesabekayo ngosuku olulodwa - usengozini yokuba yinto ehle emehlweni abanye. Futhi uma umphefumulo uvumelane nalesi sitayela - hamba endleleni yokukhula okuncane kancane kancane.
Izibonelo zamajaji amantombazane ahamba phambili ngo-2014 ungabona kugalari lethu.
Umkhwenyana weManicure 2015
Izithombe eziphathekayo - ehlobo 2016
Ama-Moccasins Abesifazane 2016
Izikhwama Zesikhumba Zesifazane
Lokhu kubalulekile: izizathu ezinhlanu zokuthi kungani udinga ukulahla omdala!
Izembatho zemisebenzi yangaphandle
Izinhlanzi zezinwele ze-Bezsufatnye - uhlu lwamaningi athandwayo nokulinganisa okungcono kakhulu
IJuice ye-burdock - ukuphikisana
I-Pinko - ikhwalithi ye-Italy nesitayela sayo yonke into enhle
UKristen Stewart uhlangana nomuntu owayengumthandi uCara Delevin
Amachashazi abomvu ebusweni
I-Beach Tunic - amamodeli amahle kunayo yonke yenkathi entsha
I-Krivosheya ezisanda kuzalwa
Umdlali uJacred Leto uzoletha elinye lamakha ama-Gucci amadoda
Indlela yokugqoka leggings ngezicathulo?
Izitayela zezinsikazi ze-2015
Ukunakekela ekhaya iThabernemontana
Indlela yokwenza i-rose kusuka ku-napkins?